Eyona midlalo ilungileyo ifihliweyo ye-Android | I-Androidsis
Eyona midlalo ilungileyo ifihliweyo ye-Android
UAron Rivas | 06/04/2021 16:00 | Izixhobo ze-Android, Imidlalo ye-Android
Amaxesha amaninzi sizifumana sikulindelo olubonakala ngathi alunasiphelo, kwaye kungala maxesha apho ukuba nemidlalo yokuphazamiseka kusenza sibulale ixesha ngokukhawuleza. Ngale nto akukho ndlela ibhetele yokwenza ngaphandle kokuba imidlalo efihliweyo, Kungenxa yoko le nto sikuphathela olu qokelelo, apho uya kufumana khona eyona midlalo mihle kolu didi lwe-Android, ezo unokuzonwabisa kwaye uzonwabise ngazo.
Emva koko siza kukudwelisa eyona midlalo ifihliweyo ifumaneka ngoku kwiVenkile yeGoogle Play. Zonke zikhululekile kwaye zithandwa kakhulu kwaye zikhutshelwa ezininzi.
1 Imfihlelo Manor: Khangela izinto ezifihliweyo
2 Uhambo lukaJuni-Imfihlakalo kunye nezinto eziHleliweyo
3 Isixeko esifihliweyo: Into eyonwabisayo yeNjongo
4 USherlock: Amatyala Afihliweyo
5 Umbutho wabucala-Umbutho wabucala
6 Izinto ezifihliweyo: Imfihlakalo yaseNxweme yeNduli
7 Abafuna amanqaku: Imfihlakalo efihliweyo
8 Ingozi yePearl-Umdlalo weNjongo efihliweyo
9 Izinto ezifihliweyo Ukucocwa kweNdlu-Imidlalo yeBongo
Imfihlelo Manor: Khangela izinto ezifihliweyo
Siqala olu luhlu ngomnye weyona midlalo ikhutshelweyo kudidi lwayo: I-Mystery Manor. Esi sihloko sinokukhutshelwa okungaphezulu kwesigidi se-10 kunye nenqanaba leenkwenkwezi le-4.6 kwiVenkile yokuDlala esekwe ngaphezulu kwezimvo ezingama-480 zamawaka kunye nezimvo, uninzi lwazo oluchanekileyo noludumisayo, hayi ngelize.
Umxholo walo mdlalo uqukethe fumanisa iimfihlakalo kwilali engummangaliso, eyindawo ebubuxoki apho yonke into yenzeka khona, ngaxeshanye apho kufuneka sifumane kwaye sifumanise izinto ezingapheliyo ezifihlwe kwiimbombo ezingalindelekanga.
Lo asingomdlalo kuphela apho kuya kufuneka ufumane izinto kunye nokusombulula iimfihlakalo, kodwa ikwayiyo enye uya kubeka isakhono sakho kunye nesantya sengqondo kuvavanyo. Ikwanazo izinto ezininzi, iziporho, kunye nezilo ezithi zinike umdlalo omdaka kunye nomxholo wobumnyama.
Yiba ngumcuphi kumfihlelo weManor Manor nokusombulula iiphazili, iiphazili nayo yonke into eza ngendlela yakho, ngelixa wonwabele imizobo eyenziwe kakuhle nenomtsalane kunye nesandi esingenakuthelekiswa nanto. Enye into yile isebenza ngaphandle koqhagamshelo lweintanethi, ukuze uyidlale ngalo naliphi na ixesha naphi na.
Umthuthukisi: Umdlalo ophakathi
Uhambo lukaJuni-Imfihlakalo kunye nezinto eziHleliweyo
Omnye umdlalo omkhulu ovela kudidi lweepuzzle, i-adventure kunye nezinto ezifihliweyo. Uhambo lukaJuni lusisa kwixesha elisekwe kwi-20s eneempawu eziqhelekileyo zelo xesha kunye nezinto ezifihlakeleyo kuyo yonke indawo.
Yonke into ijikeleze imfihlo yosapho enika imeko engaqondakaliyo nenomdla kuphando ekufuneka silwenzile ukusombulula iingxaki kwaye sifumane izinto ekufuneka sizifumene.
Uhambo lukaJuni alunasiphelo kwi-adventure. Kukho iiphazili, iingxaki kunye nokusombulula okuninzi ngamaxesha onke, ngamanqanaba angabalekiyo nezintsonkotha eziza kuvavanya amandla, isantya kunye namandla engqondo omdlali ngamnye. Yiyo loo nto ngaphandle kwamathandabuzo, ngomnye umdlalo obalaseleyo wokufumana izinto ezifihliweyo.
Isixeko esifihliweyo: Into eyonwabisayo yeNjongo
Imizobo yomdlalo ibalulekile ukubonelela ngamava ngokungafaniyo nenye, kwaye yile nto iSixeko esifihliweyo siqhayisa, omnye umdlalo omkhulu wento efihliweyo ofumanekayo kwi-Android.
Kunzima kakhulu ukugqiba ngokukhawuleza onke amanqanaba alo mdlalo, kuba Inezimo ezingaphezu kwama-70 ezigcwele izinto ezifihliweyo ekunzima kakhulu ukuzifumana. Ukongeza, inemishini engaphezulu kwe-6.500 ekufuneka uyigcwalisile ukufumana umvuzo.
Ikwanemishini engaphezulu kwe-1.000 74 yokwenza, abalinganiswa abangama-15 abanomdla abaya kuvela kulo lonke uphuhliso lomdlalo kunye nokugqitywa kophando, abalinganiswa abali-XNUMX aboyikekayo onokufumana kwimigigigames ekhoyo kunye nokunye okuninzi. Lizwe apho kuhlala kuninzi ekufuneka ukwenzile. Kungenxa yoko le nto yenye yezona zinto zilungileyo ukuxhoma ngaphandle, nditsho nabahlobo, okwenza kube mnandi ngakumbi.
Umthuthukisi: G5 Ukuzonwabisa
USherlock: Amatyala Afihliweyo
Ukuba awufuni kuphela ukungena kwihlabathi lophando lwezinto ezifihliweyo kunye nokufumanisa, kodwa ufuna nokuziva ungomnye wabacuphi abaziwayo kwimbali, njengoSherlock Holmes, lo ngumdlalo wakho.
Kule mdlalo akufuneki ufumane kuphela amakhulu ezinto ezifihliweyo kwiimeko ezahlukeneyo ezinobunzima obahlukeneyoKuza nemidlalo emincinci apho kuya kufuneka utshatise iithayile, uphonononge imihlaba, kunye nenkqubela phambili yebali elinomdla.
Imizekelo isekwe kwilizwe lokubhala apho iincwadi zihlala zihamba phambili. Kukho iimeko apho izinto ezifihliweyo zigutyungelwe ngendlela yokuba ibe ngumceli mngeni wengqondo ukuzifumana ngokukhawuleza, kwaye ngakumbi nangakumbi, njengoko imisebenzi igqityiwe, ubunzima bunyuka, obenza lo mdlalo ube ngowonwabisayo. ukulahlekelwa iiyure kunye neeyure.
Kwakhona fumanisa amanani amaninzi embali kuSherlock: Amatyala afihliweyo afana noGqirha Watson odumileyo.
Umbutho wabucala-Umbutho wabucala
Le nto ifihliweyo yokufumana umdlalo yenye yezona zinto zinomdla kwaye zinomtsalane ngohlobo lwazo. Kuyo kuya kufuneka ujoyine i-odolo engaqondakaliyo kunye nemfihlo, ukuze ufumane indawo kaRichard, umalume wakho kumdlalo, njengoko lo mlinganiswa ethe wanyamalala ngokungalindelekanga. Ukongeza, kufuneka ukhusele ukhuseleko lwabantu abakhethekileyo, kwangaxeshanye apho kuya kufuneka udlule kwihlabathi ezahlukeneyo ukuqhubela phambili kunye nokuhlangabezana neenjongo.
Kukho imisebenzi engaphezulu kwama-7.600 ekufuneka uyenzile kwaye ungayeki ukukuphazamisa, phantse iindawo ezili-100 zokufumanisa, uninzi lweempawu oza kuzifumanisa njengoko uqhubeka kumdlalo, ii-minigames ezininzi zikulungele ukukwenza ube nexesha lokuzonwabisa kunye nengqokelela engaphezulu kwe-1.200 yezinto ezifihliweyo onokuzifumana.
Ngaphezulu kwezigidi ezi-5 zokukhuphela, phantse amawaka angama-900 amagqabantshintshi kunye nokulinganiswa, kunye nenqaku lokugqibela leenkwenkwezi ezi-4.4 kwiVenkile yeGoogle Play, kuyacaca ukuba lo mdlalo yenye yezona zilungileyo zohlobo lwazo, kunye nolunye lolona lonwabo naye.
Izinto ezifihliweyo: Imfihlakalo yaseNxweme yeNduli
Ukuba ufuna ukumnika imiceli mngeni enomdla kunye nobunzima obuqhubekayo, Izinto ezifihliweyo: Unxweme lweNduli eyimfihlakalo yenye indlela ebalaseleyo kuwe. Kwaye kwesi sihloko sinika amanqanaba amaninzi apho kuya kufuneka ufumane izinto ezifihliweyo kwiindawo ezinzima.
Kodwa akuphelelanga apho. Yenza i-avatar oza kuyichonga kumdlalo kwaye uhlaziye indlu endalaNgelixa uhamba malunga nemeko zokukhangela ezingamashumi amane kunye nokusombulula iiphazili ezininzi kunye namaqashiso ekufuneka zenziwe ngeendlela ezili-9 ezahlukeneyo. Kukho ibali elinemfihlakalo enomdla oza kuyifumana ngenyathelo ngalinye kunye nenkqubela phambili oyenzayo xa usombulula iingxaki ezibekwe phambi kwakho.
Umthuthukisi: I-AdoreStudio Ltd.
Abafuna amanqaku: Imfihlakalo efihliweyo
Ukuhamba kancinci kwiindawo ezikhoyo kwaye kusekwe kumaxesha amandulo, sifumana amaNqaku aBafuna: Imfihlakalo efihliweyo, umdlalo okusa ilali entle kunye nesiqalekiso esigcwele amakhulu ezinto ezifihliweyo ekufuneka uzifumene kuhambo lwakho, Ngemizobo enomtsalane kunye nabalinganiswa abaninzi abaza kuvela njengoko uqhubeka ngomdlalo.
Umsebenzi wakho kukwaphula isiqalekiso selali, njengoko uqala i-adventure ngesakhiwo esinomdla kakhulu kunye nebali elinama-twist angalindelekanga aya kukugcina ungene kumdlalo. Kwaye kwesi sihloko sikholelwa ukuba siza kunikezela ngaphezulu kwe-9.300 yemishini ekulungeleyo ukuyenza, apho uza kuchitha iiyure uzama ukuyisombulula, ke isebenza njengendawo yokuzivocavoca kwengqondo ukukhawuleza, ubuchule kunye nesantya.
Kukwakhona nesandi esibalaseleyo esiza kukubamba ukusuka kumzuzu wokuqala kunye nemidlalo emininzi yephazili, ukuba uyayisombulula, iya kukuvuza ngezinto onokuzisebenzisa kamva.
Ingozi yePearl-Umdlalo weNjongo efihliweyo
Ingxaki kaPearl isisa kwiminyaka engamashumi amathathu yegolide apho isiqwenga sokuzibulala sisembindini kwaye senzeka kwimimandla emininzi, ekufuneka uhambe umhlaba wonke ukufumana iimpendulo ezichaziweyo kwaye, ke, ucacise okwenzekileyo.
Inemeko ezintle ngokwenene, ezitsalwe ngesandla kwaye zibonisa umgangatho wobugcisa ophakamileyo kakhulu, kunye nabalinganiswa abaninzi abaya kukunceda uhambe ngendlela yemfihlakalo. Jonga iindawo ezinje ngeSixeko saseNew York, iParis, kunye namazwekazi afana neAfrika, apho kulungiswa khona iyelenqe kwaye kuya kufuneka ufumane amakhulu ezinto ezifihliweyo ekungekho lula ukuzifumana. Chitha iiyure kunye neeyure kulo mdlalo de ube usombulule imfihlelo enkulu. Ngaphandle kwamathandabuzo, omnye umdlalo obalaseleyo kudidi lwayo kwaye, ke ngoko, siyidwelise kolu luhlu.
Izinto ezifihliweyo Ukucocwa kweNdlu-Imidlalo yeBongo
Ngalo mdlalo uya kuhlala ufumana ukungcola kuyo yonke indawo endlwini. Apha, ngelixa ucocekile kwaye uyi-odola, kuya kufuneka ufumane amakhulu ezinto ezifihliweyo ezifihlwe kakuhle kuzo zonke iikona zamagumbi. Kwaye kukucoca indlu akuzange kube mnandi kangako, ngamanqanaba aya kusiba nzima ngakumbi kwaye uninzi lweziganeko apho uya kuhlala unemisebenzi yokwenza.
Indlu yomdlalo ifihla iimfihlo ezininzi, ke unokufumana izinto ezinqabileyo ongazange uzicinge ngaphambili ukuba zibe phantsi kwetyali okanye emva kwefanitshala. Kananjalo, esi sihloko siyafumaneka kwiilwimi ezininzi, ezibandakanya iSpanish, ukongeza isiNgesi. Kuyinto yemfundo kwaye lukhetho olufanelekileyo lokuba abantwana bangene kumkhwa woku-odola indlu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Eyona midlalo ilungileyo ifihliweyo ye-Android
Itrovas yam ludojn interestj kaj bonaj recenzoj
Ungasifaka njani isatifikethi sedigital kwifowuni ye-Android
Eyona midlalo ilungileyo yeDisney ye-Android